1000M na-abụghị ndị na-emepụta PoE Manufacturers & Suppliers - China 1000M na-abụghị PoE Factory
ES1208 Gigabits Unmanaged Gbanye
ES1208 bụ 8-port 10/100 / 1000mbps enweghị njikwa Ethernet na-eji Realtek RTL8370N chipset. ES1208 ana achi achi oru oma bandwit oke na ọdụ ụgbọ mmiri ọ bụla site na ụlọ ahịa na-na-ebugharị ebugharị mode na ike ebe nchekwa oke. Ọ na-enye ọdụ ụgbọ mmiri 10/100 / 1000Mbps asatọ nke kwekọrọ na 10base-T, 100base-TX na gburugburu 1000Base-T, njegharị akpaaka na-agba ọsọ ọdụ ụgbọ mmiri ọsọ 10/100 / 1000Mbps. Ikanam egosi pụrụ igosipụta ike na netwọk jikọọ / kwụpụ dynamically. ES1208 bụ obere li ...
ES1210P Gigabits Unmanaged Gbanye
Mgbanwe ES1210P bụ gigabits zuru-gigabits ejighi njikwa, na-enye ọdụ ụgbọ mmiri 10/100 / 1000Mbps asatọ na ọdụ ụgbọ mmiri abụọ 100 / 1000Mbps SFP, ha niile na-akwado izipu ọsọ ọsọ. Ikanam egosi pụrụ igosipụta ike na netwọk jikọọ / kwụpụ dynamically. ES1210P nwere nhazi njikọ dị elu, ịdị arọ dị mfe na ọrụ dị mfe, kwesịrị ekwesị maka ọfịs obere na ọkara na netwọọdụ ịnweta nchekwa. Atụmatụ kwekọrọ na IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE802.3ab, IEEE802.3x, IEEE802.3az ...
ES1226P Gigabits Unmanaged Gbanye
ES1226P bụ DCN zuru gigabit na-ejighi njikwa nnweta, na-enye ọdụ ụgbọ mmiri 24 10/100 / 1000Mbps akpaaka RJ45 na ọdụ ụgbọ mmiri 1000mbps SFP abụọ. Enweghị nhazi ọ bụla achọrọ mgbe etinyere ngwaọrụ ahụ, na izipu ọsọ ọsọ nke ọdụ ụgbọ mmiri niile nwere ike ịghọta mgbe ejikọtara ike, nke nwere ike izute ọnọdụ dị iche iche nke Ethernet. ES1226P bụ ngwaọrụ kachasị maka ụlọ ọrụ, ụlọ ahịa Internetntanetị, ebe obibi na ogige kampos iji wuo gigabit ohere. Atụmatụ Dakọtara na IEEE802.3 、 IEE ...
ES1224 Gigabits Unmanaged Gbanye
Mgbanwe ES1224 bụ igwe gigabits zuru ezu DCN na-ejighi njikwa, na-enye ọdụ ụgbọ mmiri 10/100 / 1000Mbps dị iri abụọ na anọ, ha niile na-akwado izipu ọsọ ọsọ. ES1224 ana achi achi oru oma bandwit oke na ọdụ ụgbọ mmiri ọ bụla site na-echekwa na-na-ebugharị ebugharị mode na ike ebe nchekwa oke. Ọ na-akwado mmụba njikwa nke nwere ike zere ọnwụ nfe na nnyefe na nnabata. IEEE802.3az I arụmọrụ Ethernet na-arụ ọrụ nke ọma na ES1224 na-eme ka ọ nwee ike ibelata ike oriri yana ...
ES1216 Gigabits Unmanaged Gbanye
Mgbanwe ES1216 bụ DCab zuru gigabits ejighi njikwa, na-enye ọdụ ụgbọ mmiri 10/100 / 1000Mbps iri na isii, ha niile na-akwado izipu ọsọ ọsọ. ES1216 ana achi achi oru oma bandwidth oke na ọdụ ụgbọ mmiri ọ bụla site na-echekwa na-ebugharị ebugharị mode na ike ebe nchekwa oke. Ọ na-akwado mmụba njikwa nke nwere ike zere ọnwụ nfe na nnyefe na nnabata. Ike Ither Ethernet ọkọlọtọ IEEE802.3az na ES1216 na-eme ka ọ nwee ike belata ike oriri na oke ...